Telefoonkii hogaamiyihii Naziyiintii Germalka Hitler oo lagu iibiyay £161,000. + video – fogaanarag
Layaabka / Wararka | By Jama
Telefoonkii hogaamiyihii Naziyiintii Germalka Hitler oo lagu iibiyay £161,000. + video
Taleefoonkii uu isticamaali jiray hogaamiyaha Nazi-ga ee Germany dagaalkii 2aad ee aduunyada ayaa iminka lagu xaraashay lacag gaaraysa £161,000.
Taleefoonkani ayaa waxaa dhufeyskii uu ku dhuumanayey Hitler ka soo saaray ciidamadii Ruushka ee waqtigaasi la dagaalamayey Nazi-ga sanadkii 1945-kii. Xaraashka taleefoonkani ayaa waxaa la geeyey xarunta lagu iibiyo waxyaabaha taariikhiga ee dalka Mareykanka, lama shaacin magaca qofka iibsaday taleefoonkaasi.
Saraakiishii Ruushka ee ka qeyb qaatay jebinta Nazigii Germany ayaa taleefoonkan markii ay heleen ku wareejiyey sarkaal ka tirsanaa ciidamada Ingiriiska oo la oran jiray Sir Ralph Rayner, kaasoo intuusan geeriyoon 1977-kii dhaxal ahaan ugu siiyey wiilkiisa Ranulf.
Ranulf oo iminka ah 82 jir ku nool magaalada Dalish, gobolka Devon ee dalka Britian ayaa go’aasaday inuu teleefoonkii Hitler geeyo goobaha taariikhiga si loogu xasuusto xasuuqii uu geystay hogaamiyahii Nazi-ga.
Afhayeenka xarunta Alexander ee xaraashka waxyaabaha taariikhiga ayaa sheegay in taleefonkani uu Hilter u adeegsaday dilka malaayiin qof. Waxa uu ka mid ahaa buu yiri hubka wax gumaada oo uu isticmaalay ninkii ugu naxariista darnaa dunida ee Adlof Hitler.
Mohamed Abdi Afgoye